ကိုဗဈကာလအတှငျး အမမြေားအဖှဲ့အနနေဲ့ အခကျအခဲတှေ အမြားကွီး ရှိနတေယျ ဒျေါနှဲ့နှဲ့စနျး | Popular
ကိုဗဈကာလအတှငျး အမမြေားအဖှဲ့အနနေဲ့ အခကျအခဲတှေ အမြားကွီး ရှိနတေယျ ဒျေါနှဲ့နှဲ့စနျး
November 27, 2020 Asian Fame
ကိုဗစ်ကာလအတွင်း အမေများအဖွဲ့အနေနဲ့ အခက်အခဲတွေ အများကြီး ရှိနေတယ် ဒေါ်နွဲ့နွဲ့စန်း
ကိုဗစ်ကာလအတွင်း သာမန်လူတန်းစားတွေ၊ အခြေခံလူတန်းစားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေ မလုပ်ရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အခက်အခဲတွေဖြစ်လို့နေပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာမှ အနုပညာသက်ကြီးရွယ်အိုတွေဖြစ်တဲ့ အမေများအဖွဲ့ အတွက်လည်း အခက်အခဲတွေဖြစ်လို့နေပါတယ်။ ကိုဗစ်ကာလမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေ အားလုံးခက်ခဲနေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီကာလကြီးအမြန်ပြီးအောင် ဆုတောင်းနေတယ်လို့ ဒေါ်နွဲ့နွဲ့စန်းက . . .
ဒီရောဂါကြီးကြောင့် အားလုံး အခက်အခဲတွေတော့ ဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်။ ခက်ခဲတာကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ပြီးမှာတောင်မဟုတ်ဘူး။ ဒါက တစ်နိုင်ငံတည်းမှာတင် ခက်ခဲနေတာမဟုတ်ဘူး။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ခက်ခဲနေတာဆိုတော့ ဘာမှပြောစရာမရှိဘူး။သူလည်း သူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူ ဒုက္ခရောက်နေသလို၊ ကိုယ်လည်း ကိုယ့်အတိုင်းအတာနဲ့ကိုယ် ဒုက္ခရောက်နေတာဆိုတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြောလို့မရဘူးလေ။ အခက်အခဲကြီးကိုတော့ ထိုင်ပြီး ခက်ခဲတယ်ဆိုပြီး အော်နေလို့မရတော့ဘူး။ ဒီအခက်အခဲကြီးကို ဘယ်လိုတွန်းလှန်ရမလဲ။ ဘယ်လို လက်တွဲဖြေရှင်းမလဲ။ဘယ်လိုကျော်လွှားမ လဲဆိုတာကိုပဲ မေးရမှာပေါ့နော်။ အဲ့ဒီအတွက် အကုန်လုံးခက်ခဲတာဆိုတော့ ဘာမှပြောလို့မရဘူး။ အကုန်လုံးကို ကောင်းအောင်ပဲ ဖြေရှင်းနေရတာပဲလို့ ကိုဗစ်ကာလအဆင်မပြေမှုများကို ဒေါ်နွဲ့နွဲ့စန်းက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
အသက်အရွယ်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ နေထိုင်မှုပုံစံတွေကိုပါ ပြောင်းလဲပစ်ရတာ များတယ်လို့ ဒေါ်နွဲ့နွဲ့စန်းက…အမေတို့မှာက အသက်အရွယ်ကြီးလာ တာနဲ့အမျှ တစ်ရက်နဲ့တစ်ရက် အဓိကလုပ် ဖြစ်တာကတော့ ဘာသာရေးပေါ့နော်။အမေ ကအခုဆို အသက်က ၈၀ ရှိနေပြီ။အသက်က စကားပြောလာတဲ့အချိန်ကျတော့ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါတော့ဘူးပေါ့နော်။ အမေက အစကတည်းက အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ရ တာ ကိုယ့်ဘဝကြီးလို ဖြစ်နေတော့ တစ်ခါ တလေ ဇာတ်ကားတွေဘာတွေ ပြန်ရိုက်ချင်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါတွေကို စိတ်ပဲရှိတော့တာပါ။ တကယ်မလုပ်နိုင်တော့ ပါဘူး။ အခုကိုယ်လုပ်နိုင်တာက ဘာသာရေး ပဲဆိုတော့ ဘာသာရေးကိုပဲစိတ်ထဲမှာ အမြဲရှိ ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကို အေးအေးဆေးဆေးပဲ ဖြတ်သန်းဖြစ်တယ် လို့ပြောပါတယ်။
ကိုဗဈကာလအတှငျး သာမနျလူတနျးစားတှေ၊ အခွခေံလူတနျးစားတှဟော သူတို့ရဲ့ အလုပျအကိုငျတှေ မလုပျရတာ ဖွဈတဲ့အတှကျ အခကျအခဲတှဖွေဈလို့နပေါတယျ။ အဲ့ဒီထဲမှာမှ အနုပညာသကျကွီးရှယျအိုတှဖွေဈတဲ့ အမမြေားအဖှဲ့ အတှကျလညျး အခကျအခဲတှဖွေဈလို့နပေါတယျ။ ကိုဗဈကာလမှာ မွနျမာနိုငျငံမှာရှိတဲ့ ပွညျသူတှေ အားလုံးခကျခဲနတော ဖွဈတဲ့အတှကျ ဒီကာလကွီးအမွနျပွီးအောငျ ဆုတောငျးနတေယျလို့ ဒျေါနှဲ့နှဲ့စနျးက . . .
ဒီရောဂါကွီးကွောငျ့ အားလုံး အခကျအခဲတှတေော့ ဖွဈနကွေတာပေါ့နျော။ ခကျခဲတာကို ပွောရမယျဆိုရငျတော့ ပွီးမှာတောငျမဟုတျဘူး။ ဒါက တဈနိုငျငံတညျးမှာတငျ ခကျခဲနတောမဟုတျဘူး။ တဈကမ်ဘာလုံးမှာ ခကျခဲနတောဆိုတော့ ဘာမှပွောစရာမရှိဘူး။သူလညျး သူ့အတိုငျးအတာနဲ့သူ ဒုက်ခရောကျနသေလို၊ ကိုယျလညျး ကိုယျ့အတိုငျးအတာနဲ့ကိုယျ ဒုက်ခရောကျနတောဆိုတော့ ဘယျသူ့ကိုမှ ပွောလို့မရဘူးလေ။ အခကျအခဲကွီးကိုတော့ ထိုငျပွီး ခကျခဲတယျဆိုပွီး အျောနလေို့မရတော့ဘူး။ ဒီအခကျအခဲကွီးကို ဘယျလိုတှနျးလှနျရမလဲ။ ဘယျလို လကျတှဲဖွရှေငျးမလဲ။ဘယျလိုကြျောလှားမ လဲဆိုတာကိုပဲ မေးရမှာပေါ့နျော။ အဲ့ဒီအတှကျ အကုနျလုံးခကျခဲတာဆိုတော့ ဘာမှပွောလို့မရဘူး။ အကုနျလုံးကို ကောငျးအောငျပဲ ဖွရှေငျးနရေတာပဲလို့ ကိုဗဈကာလအဆငျမပွမှေုမြားကို ဒျေါနှဲ့နှဲ့စနျးက ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
အသကျအရှယျကွီးလာတာနဲ့အမြှ နထေိုငျမှုပုံစံတှကေိုပါ ပွောငျးလဲပဈရတာ မြားတယျလို့ ဒျေါနှဲ့နှဲ့စနျးက…အမတေို့မှာက အသကျအရှယျကွီးလာ တာနဲ့အမြှ တဈရကျနဲ့တဈရကျ အဓိကလုပျ ဖွဈတာကတော့ ဘာသာရေးပေါ့နျော။အမေ ကအခုဆို အသကျက ၈၀ ရှိနပွေီ။အသကျက စကားပွောလာတဲ့အခြိနျကတြော့ စိတျသှားတိုငျးကိုယျမပါတော့ဘူးပေါ့နျော။ အမကေ အစကတညျးက အနုပညာအလုပျတှလေုပျရ တာ ကိုယျ့ဘဝကွီးလို ဖွဈနတေော့ တဈခါ တလေ ဇာတျကားတှဘောတှေ ပွနျရိုကျခငျြတဲ့အခြိနျတှရှေိတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒါတှကေို စိတျပဲရှိတော့တာပါ။ တကယျမလုပျနိုငျတော့ ပါဘူး။ အခုကိုယျလုပျနိုငျတာက ဘာသာရေး ပဲဆိုတော့ ဘာသာရေးကိုပဲစိတျထဲမှာ အမွဲရှိ ပွီး ကိုယျ့ရဲ့ဘဝကို အေးအေးဆေးဆေးပဲ ဖွတျသနျးဖွဈတယျ လို့ပွောပါတယျ။
ဆိုရှယျမီဒီယာမှာ ပျေါပွူလာဖွဈတာနဲ့ အနုပညာရှငျလို့ သတျမှတျကွတာ တျောတျော နှမွောစရာ ကောငျးတယျဆိုတဲ့ ဒါရိုကျတာဦးမောငျမောငျမွငျ့
အသက် ၂၈ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ရှင်အိမ့်ချစ်ရဲ့ ပြောင်းလဲမှု